Indawo yokuhlala yaseAlaknanda Village
Ifama sinombuki zindwendwe onguPrerna
Hlala kule ndawo intle yeHimalaya yokuhlala kwiNtili yeTehri Garhwal emi kumphakamo oyi-5000 ft kwindlela eya eBadrinath naseKedarnath. Awunakufumana kuphela ukuzola kwendawo kodwa kunye nenkcubeko eyoyikisayo yeLali. Izindlu ezijikeleze ilali zizakhiwo zenkulungwane zakudala ezenziwe ngamatye kunye nemithi. Abantu baloo lali banobubele kakhulu. Unokuhambahamba kwigadi yeziqhamo kwaye ubone umbono wentlambo ebusuku.
Yindlu ecocekileyo necocekileyo elalini enazo zonke izinto ezisisiseko. Singakwazi kwakhona ukulungiselela i-bonfire ngokuhlwa kunye nokutya, iziselo kunye nenkqubo yokudansa encinci ye-dhol damo. Ukutya okwenziwa ekhaya nako kunokubonelelwa. Isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa @600 INR. Sinokubonelela ngesidlo sasemini sepikniki kunye nokuhamba kweLali njengemisebenzi yosuku. Zonke izidlo zenziwe ngemifuno emitsha evela eFama. Ungaphinda uchithe ixesha lakho eFama ujonge ubuchule boBume bendalo.
Ubumelwane bufana nentaba enoxolo eqhelekileyo kunye nabantu abasebenza imini yonke kwiifama, besondla iinkomo zabo, kwaye baxakeke kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla apho abantu abadala bekhangela umntu oza kuthetha naye kwaye babelane ngamabali abo. Abantwana abaya esikolweni kusasa baze badlale ngokuhlwa. Izinja ezintle zesitrato ezijikeleze ilali. Uya kubona kwakhona iintlobo ezininzi zeentaka ezinemibala eyahlukeneyo
Umbuki zindwendwe ngu- Prerna
Ndizakufumaneka xa undwendwe lufuna naluphi na ulwazi .